Trump oo hanjabaad u diray Dowladaha xubnaha ka ah QM | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Trump oo hanjabaad u diray Dowladaha xubnaha ka ah QM
Trump oo hanjabaad u diray Dowladaha xubnaha ka ah QM
Madaxweyne Donald Trump ayaa khudbad ka jeedin doono shirka sanadlaha ah ee Qaramada Midoobay ee ka dhacaya magaalada New York Photo/Reuters
Madaxwaynaha dalka Mareynkanka Donald Trump, ayaa ku goodiyay inuu deeqaha dhaqaale uu ka jaran doono dalalka ka qayb qaata cod u qaadidda Qaramada Midoobay, kaasi oo ah qaraar ka dhanka ah go’aankii Trump ee magaalada Qudus.
Donald Trump, oo ka hadlay Aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa sheegay in Mareynkanka uu kor kala socon doono qaabka ay codeyn uga dhaceysa xarunta Qaramada Midoobay ee magaalada New York.
“codkooda hanagu mucaaradaan, lacag badan baa anagana noo baaqan doontee” ayuu intaasi Ku daray.
Riyad al-Malki, Wasiirka Arrimaha Dibadda Falastiin,ayaa arbacadii shalay ku eedeeyay Mareynkanka inuu u goodiyay wado xubno ka ah Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay oo ku aadanaa inuu deeqaha ka jaranayo haddii ay taageeraan Qaraarka Qaramada Midoobay ay kaga hor timid in Qudus ay tahay caasimadda Israel.
Madaxwaynaha dalka Maraykanka, Donald Trump, ayaa bilowgii bishan Ku dhawaaqay in dowladda Maraykanka ay magaalada Qudus u aqoonsatay Caasimadda Israel.
Go’aankaasi ayaa dhaliyay carro iyo dibad baxyo ay dhigayaan Falastiiniinta Ku nool Daanta Galbeed.
Maraykanka, ayaa awooddiisa Veto-ga Ku hor istaagay codayn golaha Ammanka ee Qaramada Midoobay ay Ku diidayeen go’aankii Trump.
Qaraarkan ayaa waxaa soo diyaarisay dowladda Masar waxaana taageray xulafada soo jireenka ah ee dalka Maraykanka kuwaasi oo kala ah Faransiiska iyo Ingiriiska.
Qaraarka ayaa loo weeciyay golaha guud ee Qaramada Midoobay halkaasi oo aan oolin codka Veto-ga oo ah diidmo qeexan oo golaha Ammanka ee Qaramada Midoobay ay Ku leeyihiin dowladaha Shiinaha Ruushka, Faransiiska, Ingiriiska iyo Maraykanka.
Previous articleAkhriso Shuruudihii lagu sii daayay C/raxmaan Cabdishakuur iyo maxkamadayntiisa oo socota (Sawiro)
Next articleMaxkamadda Gobalka Banaadir oo dambi ku waysay C/raxmaan Cabdishakuur